Alakamisy Voalohany amin'ny Fiaviana
Amin'izany andro izany hohiraina ao amin'ny tanin'i Jodà izao hira izao: Manana tanàna mafy isika! Ny famonjeny no ataony mandany sy manda ivelany.
Vohay ny vavahady, avelao hiditra ny firenena marina, mitana ny fahamarinana.
Ny fo mahalefitra iantohanao fiadanana, dia fiadanana noho izy matoky anao.
Matokia an'ny Tompo mandrakizay hianareo, fa vatolampin'ny taona rehetra Iaveh.
Manetry izay nonina any amin'ny havoana izy; naniva ny tanàna miezinezina, naniva azy amin'ny tany, nataony mikasika ny vovoka izy
ka voahosihosin'ny tongotra izy, dia ny tongotry ny ambany toetra sy ny dian'ny ory.
(Raha vao miainga ny fivavahana mandeha) Miderà an'ny Tompo, fa tsara fo izy, fa mandrakizay ny famindram-pony!
Aleo mitady fialofana amin'ny Tompo, toy izay mitoky amin'olombelona.
Aleo mitady fialofana amin'ny Tompo, toy izay mitoky amin'ny mpanapaka.
Amohay ny vavahadin'ny fahamarinana aho, mba hidirako, sy hiderako an'ny Tompo.
(Ny mpisorona) Ity no vavahadin'ny Tompo, ny marina no mahazo miditra eo.
(Ny filohan'ny vahoaka) Hankalaza anao aho fa namaly vavaka ahy hianao, ka efa famonjena ahy hianao.
Ry Iaveh ô, omeo ny famonjena! Ry Iaveh ô, omeo ny fanambinana!
(Ny mpisorona miteny amin'ny mpitarika) Isaorana anie ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo! Mitso-drano anareo, avy ao an-tranon'ny Tompo izahay!
Andriamanitra Iaveh; mampamirapiratra ny fahazavana amintsika izy. Ny mpisorona miteny amin'ny vahoaka - (Ny mpisorona miteny amin'ny vahoaka) Rohizo kofehy ny sorona, hatreo amin'ny tandroky ny otely.
Evanjely Masin'i Jesoa Kristy nosoratan'i Md. Matio 7,21.24-27.
Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompo, Tompo, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra; fa izay manao ny sitra-pon'ny Raiko izay any an-danitra, izy ihany no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra.
Koa amin'izany, na zovy na zovy mandre izao teniko izao ka mitandrina azy, dia hoharina amin'ny lehilahy hendry izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy;
ary latsaka ny ranonorana ka tondraka ny ony, ary nifofofofo ny rivotra namely izany trano izany, nefa tsy nianjera izy, fa niorina teo ambonin'ny vatolampy.
Ary na zovy na zovy mandre izao teniko izao, ka tsy mitandrina azy, dia hanahaka ny lehilahy adala nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika;
ary latsaka ny ranonorana ka tondraka ny ony, ary nifofofofo ny rivotra namely izany trano izany, dia nianjera izy ka loza ny faharavany.